Kildare dia nofinofin'ny mpitia sakafo! Ho hitanao ny sakafo tsara indrindra voaharo avy amin'ny sakafo avy any an-toerana izay miandry anao isaky ny tanàna sy vohitra.
Tsy misy maharesy ny fandraisana sy sakafo matsiro miaraka amina labiera fanaovana asa-tanana eo an-toerana. Misy safidy fananana nahazo loka azafady.
Gastropub manome tombam-bidy manome loharano tsara ny vokariny ary mamoaka ny safidiny ary labiera fanaovana asa-tanana. Ny traikefa fisakafoanana sy lanja lehibe amin'ny vola.
Trano fisakafoana Butt Mullins
Butt Mullins dia orinasa tantanan'ny fianakaviana fantatra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mafana sy ny fiheverany ny antsipiriany mandritra ny 30 taona.
Manolotra ny vokatra tsara indrindra eto an-toerana hamoronana fihodinana amin'ny sakafo irlandey maoderina misy lovia iraisam-pirenena.
Gastropub nahazo loka loka nahandro nahandro irlandey, labiera artisan ary steak nandrahoina tamin'ny vato mahamay.
Any amoron'ny Grand Canal any Sallins, Lock13 no 1st Ever Brewpub an'i Kildare.